Maamulka Ximan iyo Xeeb oo VOA u sheegay in Xasan Daahir Aweys ay gacanta ku hayaan – idalenews.com
Maamulka Ximan iyo Xeeb oo VOA u sheegay in Xasan Daahir Aweys ay gacanta ku hayaan
Wararka aan ka haleyno gobalada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in xaley saqdii dhexe halkaas lagu qabtay Xasan Daahir Aweys oo kamid ah saraakiisha sar sare ee Al-Shabaab.
Afhayeenka maamulka Ximan iyo Xeeb, Maxamed Cumar Hagafeey oo la hadlay VOA-da ayaa sheegay in Xassan Daahir uu xaley 3-dii habeenimo ee saqadii dhexe la qabtay, isagoo ku suganaa xeebta gobalka Mudug, gaar ahaan deegannada uu maamulo Ximin iyo Xeeb.
Hagafeey ayaa sheegay in markii laga warhelay in uu soo gaaray Xasan Daahir Aweys deegannada ay maamulaan in la diyaariyay ciidamo gaar ah kuwaasoo markii dambe dedaal ay sameeyeen ay ku guuleesteen in si nabad ah ay gacanta ku soo dhigeen Xasan Daahir Aweys.
Wuxuu sheegay in Xasan Daahir Aweys uu hadda isagoo bad qaba uu ku jirro gacanta madaxweynaha maamulka Ximin iyo Xeeb Cabdulaahi Maxamed Cali Baarleex oo dhawaan loo doortay madaxweynaha maamulkaas.
Mar la weydiiyay sida ay ka yeeli doonaan Xasan Daahir Aweys iyo dadka la socda?
Wuxuu sheegay in arrintaas uusan ka hordhici karin, balse maamulkooda uu ka tirsan dowladda Fedaraalka Soomaaliya isla markaana laga yaaabo in loo gacan galiyo dowladda, maadama uu Xasan Daahir oo horre guddoomiye u ahaa ururkii burburay ee Xisbul Islaam uu isoo dhiibay.
Afhayeenka maamulka Ximan iyo Xeeb, ayaa ugu dambeen sheegay in Xasan Daahir Aweys uu hadda ku sugan yahay deegan ammaan ah, waxaana la jooga ayuu yiri madaxweynaha maamulka Ximin iyo Xeeb, wuxuuna intaas ku daray waa guulihii ugu waaweynaa ee uu durba ku tallaabasaday madaxwweynaha cusub.
Si kastaba, Xasan Daahir Aweys ayaa xaley gaaray magaalada Xaradheere isagoona uga sii gudbay deeganno hoos yimaada maamulka Ximin iyo Xeeb, waxaana la socda saraakiil ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasoo ka soo cararay toddobaadkan degmada Barraawe ee gobalka Shabeellaha Hoose, halkaas oo dhawaan labo garab oo katirsan Al-Shabaab ay ku dagaalameen.
Mamulka Jubaland iyo Madaxdooda oo Switzerland laga Taageeray [Video-Sawiro]
Faysal Cali Waraabe oo u gafay Xukuumadda Somalia iyo isaga oo amaanay Prof. Axmed Ismail Samatar